October 21, 2020 - Amawpyay
နိုငျငံကြျောအဆိုတျော မင်ျဂလာအခမျးအနားမှူး ဦးရနျပိုငျစိုးအသကျ (၇၀)နှဈ ကှယျလှနျ
နိုငျငံကြျောအဆိုတျော မင်ျဂလာအခမျးအနားမှူး ဦးရနျပိုငျစိုးအသကျ (၇၀)နှဈ ကှယျလှနျ နိုငျငံကြျောအဆိုတျော မင်ျဂလာအခမျးအနားမှူး ဦးရနျပိုငျစိုး အသကျ (၇၀)နှဈသညျ ယနေ့ အောကျတိုဘာ၂၁ရကျနံနကျ ၁၁နာရီ ၁၁မိနဈ တှငျ ကှယျလှနျခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။ “သူသဆေုံးခြိနျမှာ အသကျ (၇၀)ပါ။ မွောကျဥက်ကလာဆေးရုံမှာ ဆုံးတာ။ အသုဘကတော့ ဒီညနေ ခပြါမယျလို့ သိရတယျ”လို့ ဂီတအစညျးရုံးက ဦးဇျောထူးအောငျက ပွောပါတယျ။ နှလုံးရောဂါနဲ့ ဆီးခြို‌‌ သှေးခြို ‌ရောဂါခံစားနရေတဲ့ ဦးရနျပိုငျစိုးက ဆေးရုံတကျ ကုသရာမှာ ကိုဗဈရောဂါ ပေါ့စတဈဖွဈကာ သဆေုံးခဲ့တာဖွဈပါတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဦးရနျပိုငျစိုးနဲ့ နီးစပျသူ အဆို‌တျောဖိုးသောကွာ က သဆေုံးမှုကို အတညျပွု ရေးသားဖျောပွထားပမေဲ့ လကျရှိအခြိနျမှာ ဝမျးနညျး ပူဆှေးဖွဈနလေို့ …
ကိုယျတိုငျ ကိုဗဈပေါ့စတဈ ကူးစကျခံနရေကွောငျး အသိပေးတဲ့ ဦးကြျောသူ
ကိုယျတိုငျ ကိုဗဈပေါ့စတဈ ကူးစကျခံနရေကွောငျး အသိပေးတဲ့ ဦးကြျောသူ နာရေးကူညီမှုအသငျး ဥက်ကဌ ဦးကြျောသူ က ကိုယျတိုငျ ကိုဗဈ‌ပေါ့စတဈ ကူးစကျ ခံ‌နရေပွီဆိုတဲ့ အကွောငျးကို သူရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာကနေ အသိပေး ပွောကွားလာပါတယျ။ “တှပွေီ့… P တဲ့။ အမြားအတှကျ မြိုးဆကျသဈတှကေို ဦးဆောငျ ပေးဆပျရငျးဖွငျ့ ကဆြုံးခဲ့ရမှုကို ကွနေပျ ပီတိဖွဈစှာ လကျခံလိုကျမိပါသညျ။ ငါမရှိရငျ ငါ့ထကျ ရဲရဲကွီး ပေးဆပျရဲသူ ရောကျလာလိမျ့မယျ။ ငါမရှိရငျ ငါ့ထကျ သီလ လုံခွုံ သစ်စာ ဆိုရဲသူ ရောကျလာလိမျ့မယျ။ ငါမရှိရငျ ငါတို့ ခမြှတျခဲ့တဲ့ ပရဟိတ အုတျမွဈ အဆောကျအဦးက ဒီထကျပိုပွီး ခိုငျမာ၊ …
သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ အံ့မခန်း လှည့်ကွက်များ (၁) သင့်လည်ချောင်း ထဲက ယားနေတယ် ဆိုရင် နားရွက်ကို ကုတ်လိုက်ပါ… နားရွက်မှာရှိတဲ့ အာရုံကြောတွေ ကိုလှုံ့ဆော်မိတဲ့ အခါ အဲ့ဒီ အာရုံကြော တွေဟာ လည်ချောင်း ထဲက ကြွက်သားတွေကို အလိုအလျောက် ရုတ်တရက် တုံ့ပြန်စေပြီး ယားယံမှုကို ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မယ် (၂) လူတွေဆူညံနေတဲ့ နေရာမှာ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းပြောတဲ့နေရာ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အသံကို မကြားနိုင် ဖြစ်နေပါသလား…. ရုတ်ချည်း ပြောလိုက်တဲ့အသံကိုကြားဖို့ဆိုရင်တော့ ညာဘက်နားကို အသုံးပြုပါ… ဂီတသံစဉ်တွေကိုနားထောင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဘက်နားကို အသုံးပြုပါ…. (၃) သန့်စင်ခန်း ဒါမှမဟုတ် တခြား သင့်တော်တဲ့ တစ်နေရာရာနဲ့ အလှမ်း ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာ သင့်အနေနဲ့ …
အများနဲ့မတူ အောင်မြင်တဲ့လူမှုဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
အများနဲ့မတူ အောင်မြင်တဲ့လူမှုဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? လူတိုင်း တစ်နေ့ကို ပျဉ်းပျ အလုပ်ချိန် ၈နာရီ လုပ်ကြ တယ်။ လူတိုင်း ၈နာရီဝန်းကျင် အိပ်စက်အနားယူကြတယ်။ ဒါဆိုလူတွေ အကုန်လုံးက ဆင်းရဲချမ်းသာ တူညီနေကြ မှာပေါ့။ သို့သော် တကယ်တမ်း လက်တွေ့ ဘ၀မှာ ကွဲပြားနေ ကြတာ ဘာ့ကြောင့် လဲ? ကျွန်တော် နားလည်တဲ့ သူများနဲ့ မတူတဲ့ ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင် ချင်ရင်တော့ သူများလုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်လို့ မရဘူး။ ဒါဆို ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ? Differentiate ဖြစ် ရမယ်။ သူများနဲ့မတူရဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကွဲထွက်နေ ရမယ်။ လူတော်တော် များများက မနက်ဖန်အတွက် ကြည့်ပြီး …
တယောက်တည်း စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန် သင့်ကို အဖော်ပြုပေးနိုင်မယ့် ဆောင်ပုဒ် (၇) ခု
တယောက်တည်း စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန် သင့်ကို အဖော်ပြုပေးနိုင်မယ့် ဆောင်ပုဒ် (၇) ခု စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ အချိန် ဆောင်ပုဒ်တွေ၊ ဆိုရိုး စကားတွေက သင့်ကို ပြန်လည်ပျော်ရွှင်ဖို့ ကူညီပေးနိုင် ပါတယ်။ ဥပမာ “အနာခံမှ အသာစံရ” ဆိုတဲ့ စကားကို သင်ကြားတာနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှ တစ်ချိန်ချိန် အောင်မြင်မယ် ဆိုတာကို တန်းမြင် မိမှာပါ။ သင်စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ အချိန် သင့်ကို တစ်ယောက်မှ ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုရင်လည်း “ကိစ္စမရှိဘူး”လို့ ကိုယ့်ကို ကိုယ် အားတင်းပြော ကြည့်ပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သင့်အတွက် သင်ရှိပါတယ်။ သင်စိတ်ဓာတ်ကျ လာတဲ့ အချိန် အဖော်ပြုပေး နိုင်မယ့် ဆောင်ပုဒ်ကောင်းတွေကို ကြည့်လိုက် …